Ihlathi eliluhlaza lifanelekile ukuhamba ngebhayisikili, ukuhamba ngezinyawo noma isiqhingi
I-i-townhouse ephelele ibungazwe ngu-Niki
Itholakala edolobheni elikhangayo lendabuko laseCypriot, kwenye yezindawo eziluhlaza kakhulu futhi cishe enkabeni yesiqhingi enikeza ithuba lokuhamba kalula nokwazi sonke isiqhingi, imizuzu engama-20 nje ukusuka ogwini.
Isanda kulungiswa kabusha, itholakala phakathi kwamahlathi amahle nabukekayo enkabeni yesiqhingi, ingaphansi kwegquma leSigodlo sezindela saseStavrovouni esidumile, sikumaminithi ambalwa ukusuka edolobheni lezivakashi laseLefkara, futhi ngasikhathi sinye kuphela. imizuzu engu-20 olwandle, inhlokodolobha Nicosia 25 futhi imizuzu 35 kusukela ethekwini edolobheni Limassol.
Inemizila emihle yalabo abathanda ukuqwala izintaba, ilungele nabathandi bamabhayisikili ngenxa yemigwaqo emihle nemigwaqo yasemakhaya, ngamafuphi, indawo ekahle yokuphumula okuhle ngaphandle kwamadolobha.
4.33(12 okushiwo abanye)
4.33 · 12 okushiwo abanye
Idolobhana linebhange (ATM), indawo yokubhukuda, izindawo zokudlela eziningi nezitolo lapho ungathola khona konke okudingayo ukuze uhlale kamnandi.
Sithanda imvelo futhi siyayijabulela kakhulu, singakubonisa ngokujabula okukhulu ngosizo lwamahhala lwabaqondisi bendawo abazi ubuhle bayo.
Izilimi: English, Ελληνικά, Русский, Español